Radiotjänst oo dib u soo celinaysa lacagtii ay dadka ka qaadeen | Somaliska
Shirkada dowlada u qaabilsan ururinta lacaga telefishinka (Radiotjänst) ayaa ku dhawaaqday in ay dib u soo celin doonto lacagihii ay ka qaaday dadka kombutarada u yaalaan. Radiotjänst ayaa ilaa sanadkii 2013 waxay dadka oo dhan ka guraysay lacagta telefishinka (tv-avgift) xitaa haddii ay sheegteen in uusan TV u oolin.
Ka dib go’aan ka soo baxay maxkamada sare ayaa hada waxaa lagu qasbay Radiotjänst in ay dib u soo bixiyaan lacagaha ay beenta ku qaateen. ilaa 100.000 qof ayaa lala xiriiri doonaa si lacagtooda loogu soo celiyo. Dadka kombutarka keliya u yaalo ayaa lacagta loo soo celin doonaa, haddii qofka TV u yaalo lacag looma celin doono.
Waxay sheegeen in hawshaan ay qaadan doonto ilaa xagaaga iyo dayrta oo dhan. Hadaba haddii aad horay ugu sheegtay Radiotjänst in uusan TV kuu oolin balse aad lacag bixisay waxaad xaq u leedahay in laguu soo celiyo lacagtaada.
Kalsoonidda lugu qabo hey’addaha dowladda oo hoos u dhac weyn ku yimid
waraada Beenta intaase la ig naga daaya
mopiilada muku jiraan aan dalbadee lacagta